Taylor Swift nyeredzi mune imwe Apple Music yekutengesa | Ndinobva mac
Taylor Swift nyeredzi mune imwezve Apple Music shambadziro
Kwenguva yakati zvino, zvinoita sekunge Taylor Swift anga ave mumwe wevashandi vekambani nguva dzose kana zvasvika pakutarisa mumavhidhiyo eiyo kambani yekushambadzira mimhanzi sevhisi. Mavhiki mashoma apfuura Swift ane nyeredzi muvhidhiyo matinoona sei muimbi akarovedza muviri pachikwiriso achiimba mazwi erwiyo.
Mune chimwe chiziviso taigona kuona muimbi nyeredzi mune chimwe chiziviso uko pasi pezita rekuti Mic Drop, muimbi ari kugadzirira kuparty apo, zvakare, vakaimba mazwi kurwiyo rweJimmy Eat World Iyo yepakati, inoenderana ne2001 album Bleed American.
Tamba kunge pasina anotarisa @AppleMusic @rimahttps://t.co/QfX9l0EXX7
Muimbi akatumira chiziviso chitsva paakaundi yake yeTwitter matinogona kuona muimbi zvakare achiita rwiyo rwekuti Ndinotenda Mune Chinhu Chinonzi Rudo kubva kuchikwata cheRima. Zvekare mune kushambadzira tinogona kuona mashandisiro anoita muimbi basa rekutsvaga kuti awane rwiyo runonakidza. Kushambadzira kunopera nesirogani Kutamba kunge pasina anotarisa.
Huwandu hwezviziviso izvo Taylor Swift achatamba kuti anyore zvimwe kushambadzira kusimudzira Apple Music hazvizivikanwe, asi kushambadza uku kwatova kwechitatu kuti nyeredzi yevaimbi sezvandambotaura pamusoro. Yekutanga yekutengesa ine muimbi Iyo yaifungidzira kutengesa kwekudzokorodza kwerwiyo rwunoridzwa mushambadziro.
Kuedza kuwedzera huwandu hwevanonyorera kushumiro iyi, Apple ichangotanga chirongwa chitsva chevadzidzi, chenzvimbo dzakaganhurirwa kunyika shanu, uye icho vadzidzi vese vanogona kunakidzwa kusvika kumakore mana e 50% kuderedzwa kwemari. Musangano unotevera wevanogadzira, umo Apple ichazopa iOS 10, ichatitaridza iyo nyowani interface ichavhura iyo Apple Music application.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Taylor Swift nyeredzi mune imwezve Apple Music shambadziro
AMD Polaris Graphics yeMac 2016